Tag: WASAARAHA | Sagal Radio Services
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo u ambabaxay magaalada Brussels
Sagal Radio Services • News Report • May 1, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa Maanta waxa uu u ambabaxay Magalada Barasalis ee Wadanka Biljamka,halkaaso oo uu shir uga qeyb gali doono.
Ra’iisul Wasaaraha oo xalay kormeer ku sameeyay qeybo ka mid ah Muqdisho (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • April 1, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay wehliyeen Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Eng. C/raxmaan Yariisow iyo Saraakiil Ciidan ayaa xalay kormeer ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir, iyagoo u kuur galaya xaalada ammaanka.
Daawo: Ra’iisul Wasaaraha oo si cad uga hor-yimid heshiiskii Dekeda Berbera
Sagal Radio Services • News Report • March 3, 2018
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shir jaraa’id oo uu goor dhow qabtay waxaa uu ka hadlay heshiiskii Dekeda Berbera ee ay saamiga ku kala saxiixdeen Shirkadda DP World, Somaliland iyo dowladda Itoobiya, iyadoo heshiiskan la saxiixay xilli Ra’iisul Wasaraaha ku sugnaa Imaaraadka Carabta.
Ra’iisul Wasaare Kheyre “Tiro koob ayaa lagu sameyn doonaa hantida ay leeyihiin Wasiirada cusub”
Sagal Radio Services • News Report • March 22, 2017
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in Xukuumaddiisa ay la imaan doonto isla xisaabtan dhab ah oo ku aadan waajibaadkooda shaqo.